Guri ka Iibsashada Dubai Sida Shuruucda Guri Guri | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Iibsashada Iibsiga Magaalada Dubay Sida Loogu Tala Galay Sharciyada Guri Ahaanshaha
Kordhinta way iibsan kartaa
Iibsashada guri ee Dubai had iyo jeer ma ahan mid toos ah oo tooshsan sida ay hadda tahay. Laakiin arrimuhu hadda aad ayey uga wanaagsan yihiin hadda. Waxaa jira afar tillaabo sharciyeed oo aasaasi ah oo lagu iibsanayo guri kuyaala Dubai, waxaanan ku eegidoonaan dhammaantood qodobkaan.
waxaad ka heli kartaa gurigaaga / dhismaha guryahaaga soo socda-diyaar.
iibsiga hantida si siman oo dhakhso leh
Iibsaduhu waa inuu ka diiwaangashan RERA.
Maskaxda ku hay in sida ajnabiga ah, laguu oggol yahay inaad iibsato dhisme guryaha oo keliya meelaha loogu yeero Meelaha La Magacaabay ee Dubai. Beelahan waxaa gacanta ku dhigay Amiirkii boqortooyada Dubai ee u ogolaaday dadka aan aheyn UAE iyo kuwa aan aheyn GCC inay helaan fursad ay guri ku lahaan karaan safaaradda.
Imika hadda oo aan sidii aan ka takhalusay taas uga gudubnay, bal aan ogaano sida aad ku heli kartid gurigaaga / maalgashiga guryaha ee soo socda. Marka asal ahaan, markay tahay soo iibsashada guri ee Dubay, talaabooyinka sharciga ee soo socda sida sharciyada guryaha la raacayo waa in la raacaa.
1. Samaynta Heshiis Iibiye iyo Iibiya
Markaad fuliso raadintaada, aad hesho hanti ku habboon, sameysay baaritaan ballaaran oo ku saabsan soosaaraha, aagga Dubai, waxa ay ROI tahay, iyo in ka badan, waxaad ku sii wadi kartaa tallaabada koowaad, taasoo ah in laga wada xaajoodo shuruudaha iibka ee khadka tooska ah. iibiyaha. Waad sameyn kartaa talaabadan adigoon ka helin caawiyaha wakiilka guryaha ama la taliye sharci. Inta hartay waa in ay fuliyaan hay'ad sumcad ku leh Dubai ama sharikado dhisme sharciyeed oo sidaas u sameeya sida ku xusan sharciga guryaha.
2. Saxeexida Heshiis Iibsi Sida Sharciyada Guri Ahaaneed
Intaa ka dib, waxa ku xiga waa in la saxeexo heshiiska iibka ee loo yaqaan Memorandum of Understanding (MOU). Dukumintigaan ku yaal Dubai wuxuu cinwaankiisu yahay Qandaraaska F waxaana laga heli karaa websaydhka Waaxda Dhulka ee Dubai. Heerka ka jira Dubai waa 10% dhigaalka hantida lagu bixin doono iibiyaha isla mar. Marka talaabadan la dhammeeyo, waxaad kalabarka u socotaa hawsha.
3. Codsashada Shahaadada U Diidaya (NOC)
Marka ku xigta, waxaad kula kulmi doontaa iibiyaha xafiiska soo-saaraha. Sababta kulankan ayaa ah in la dalbado oo la bixiyo Lacag Shahaadada Diidan (NOC) ee wareejinta lahaanshaha. NOC waxaa soo saari doona soosaaraha, laakiin ka dib markii la caddeeyo inaysan jirin wax khidmad ah oo laga qaaday hantida iyadoo la raacayo khidmadaha adeegga.
4. Saameynta Wareejinta Mulkiilaha Qeybta Dubai Land
Mar haddii NOC la helo, ka dib waxaad kula kulmi doontaa iibiyaha xafiiska Waaxda Dhulka ee Dubai si wareejinta loo dhammeeyo. DLD waxay ku weydiisan doontaa inaad lacag bixin ku sameyso qaab jeeg maamulaha. Jeeggan waa in la siiyaa iibiyaha taariikhda wareejinta. Ugu dambayntiina, magacaaga oo magaca cusubi la soo saari doono, oo waxaad si rasmi ah u noqon doontaa milkiilaha guri ku yaal Dubai.
Siyaabaha kala duwan ee Guri looga iibsado Dubai
Haddii aadan awoodin inaad ku iibsato guri lacag caddaan ah, waxaad u baahan doontaa inaad dalbato amaahda guryaha.
Iibsashada hantida sida kororka ah waxay u muuqan kartaa mid dhib badan, oo leh caqabado kaladuwan oo awood u leh inay curyaamiyo ciyaartoy waqtiga yar. Laakiin Waaxda Dhulka ee Dubai oo ay weheliyaan hay'ado kale oo sharci dejin ah ayaa ka dhigaya hanaanka iibsiga hantida si sahlan oo dhakhso leh.
Ma inaan iibsadaa hanti ka baxsan qorshaha?
In kasta oo la barbar dhigo hababka kale, tani waxay qaadataa waqti. Xaqiiqdii waa habka ugu fudud ee lagu iibsado guryaha Dubia.
Iibsaduhu waa inuu u soo gudbiyaa foomka dalabka kobciyaha.
Markii la ogolaado dalabka, iibsaduhu wuxuu aadi doonaa xarunta iibka ee soosaaraha maalin horey loo sii qorsheeyay si uu u doorto qaybta una bixiyo debaajiga hore.
Waxay kuxirantahay heerka dhameystirkiisa, iibsaduhu wuxuu sugi karaa 2 ilaa 3 sano kahor inta uusan helin guriga. Soosaarahu wuxuu bixin doonaa taariikhda dhammaystirka.
Maxaad ugu iibinaysaa guri suuqa sare?
Qaabkan ayaa ah habka ugu dhakhsaha badan ee lagu iibsado guri ku yaal Dubai, laakiin howshani waa wax yar oo dhib badan, oo ku lug leh kharashyo caddaalad ah oo caddaalad ah.
Maal gashade raba inuu iibsado guri uu iibiyaha ku leeyahay amaahda wuxuu u baahan yahay inuu awood u yeesho inuu bixiyo deynta iibiyaha kahor intaan cinwaanka cinwaanka laga soo qaadin waaxda dhulka.
Mar alla markii hantida la arkay, iibsaduhu wuxuu u soo bandhigayaa dalab iibiyaha, mar alla markii la aqbalo, wakiilka iibiyaha wuxuu soosaaraa heshiiska isfahamka (qandaraaska), kaas oo sheegaya dhamaan kharashyada iyo mas'uuliyadaha dhinacyada.
Iibsaduhu wuxuu kadib bixin doonaa 10% deebaaji magaca iibiyaha si uu u ilaaliyo guriga.
Waxay kuxirantahay in iibsaduhu bixiyo lacag ama uu amaah ku qaatay, tillaabada xigta waxay ku lug leedahay bangiga iibsadaha oo fuliya habraaca qiimeynta si loo baaro guriga loona hubiyo inuu aamin ku filan yahay.
Mar haddii oggolaanshaha ugu dambeeya la sameeyo oo iibsaduhu helo tan. Iibiyaha ayaa markaa dalban doona inuu ka helo Soosaarista diidmada ah (No Objection Certificate) (NOC) soo-saaraha
Ballan ayaa markaa ballan looga qabanayaa Waaxda Dhulka si loo dhammeeyo wareejinta.
Iyada oo la raacayo dhammaan hawlgallada, iibsaduhu markaa waa inuu siiyaa 2% iyo AED315 waaxda dhulka ee Dubai, oo ay la socdaan qiimaha iibka ee iibiyaha iyo wakiilka wakiilka.
Iibsaduhu wuxuu markaa heli doonaa warqadda cinwaanka, oo magiciisa ku jiri doona, oo ay la socdaan furayaasha iyo kaararka gelitaanka guriga cusub.
Sideen ku xaqiijin karaa oggolaanshaha amaahda guryaha ee hor-u-yaal?
Haddii aadan ku bixin karin lacag caddaan ah guriga, markaa waxaad u baahan doontaa inaad dalbato amaahda guryaha. Si aad u xaqiijiso oggolaanshaha amaahda, waa kuwan dukumiintiyada fudud ee ay tahay inaad diyaarisid:
Warqad mushahar ka timid loo shaqeeyahaaga.
Waraaqaha mushaarka ee aad heshay.
Bayaanka bangiga lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Nuqul baasaboor leh oo leh sawir iyo bogga fiisaha.
Nuqul ka mid ah Aqoonsiga Imaaraatka.
Nuqul kaararka caddaynta kaararka deynta.
Marxaladda hordhaca ah ee amaahda guryaha waxay ku qaadataa toddobo maalmood deyn qaatayaasha oo qaata waqti dheer waxayna ku qaadataa waqti dheer shaqsiyaadka iskaa u shaqeysta.
Waa maxay noocyada kaladuwan ee qiimaha guryaha?
Liiska qiimaha: Qiimaha la weydiinayo ee hantida waa qiimaha liiska oo lagu gorgortami karo.
Qiimaha Iibka: Qiimaha iibku waa qiimaha milkiiluhu degto.
Qiimeynta Qiimeynta: Qiimaha wakiilka guryaha la ijaaro uu isbarbardhigayo qiimaha hantida iyo guryaha kale ee suuqa.
Waa maxay kharashyada kale ee la tixgaliyo?
Markay tahay iibinta:
Oggolaanshaha amaahda guryaha (khidmadaha baajinta)
Soo saarista khidmada / khidmada dayactirka
Dejinta DEWA / Degitaanka qaboojinta
Soosaaraha NOC haddii loo baahdo
Ujrooyinka wareejinta ee la siiyay waaxda dhulka
Markay tahay gadashada:
Lacag dhigashada sidii heshiiskii iibka ee udhaxeeyuhu iyo iibiyaha
Xiriirka korantada iyo biyaha
Lacagta dalabka amaahda guryaha haddii loo baahdo
Ujrada adeegga bulshada
Ujrada kaladuwan ee maamulka ee waaxda dhulka
La kulan qareen ka hor intaadan gadan guri magaalada Dubia, UAE Xaqiiji in heshiisyada ay kaa daboolayaan gabi ahaanba haddii uu jiro khilaaf ama dacwo. Na soo wac hadda +97150 6531334
Qurbajoogta iibsanaya guri ku yaal UAE
Shisheeyaha (oo aan ku noolayn UAE) iyo dadka waddanka u soo guurey waxay heli karaan xuquuqda lahaanshaha xorta ah ee hantida iyada oo aan la xadidin